तपाईलाई पनि यी १० गलत बानीले दिमाग कमजोर बनाइरहेको त छैन ? - तपाईलाई पनि यी १० गलत बानीले दिमाग कमजोर बनाइरहेको त छैन ?
तपाईलाई पनि यी १० गलत बानीले दिमाग कमजोर बनाइरहेको त छैन ?
२०७6, १ बैशाख, 11:07:33 AM
एजेन्सी: उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा ह्रास आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ तर युवा अवस्थामा नै यदि कुनै व्यक्तिको स्मरण शक्तिमा कमि आउँदै गएको छ भने त्यसको पछाडि कुनै गम्भीर कारण हुनसक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
यस्तो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने र अन्तमा दिमागमा खतरनाक समस्या पैदा हुने विभिन्न अनुसन्धानमा देखाइएको छ । मानिसका केही यस्ता बानी छन् जसले उनीहरुको दिमागमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्ः